စစ္စလီရှိစျေးဝယ်ခြင်း Absolut ခရီးသွား
ထွက်လာရင် စစ္စလီကျွန်းတွင်ဈေးဝယ်သည်သင်နှင့်သင်မမေ့နိုင်သောအမှတ်တရလက်ဆောင်များအတွက်စီးနင်းလိုက်ပါရန်နှင့်အိမ်သို့ယူရန်အဆင်သင့်ပြင်ပါ။ သူတို့ကိုကြည့်လိုက်၊ အနံ့၊ အရသာရှိတဲ့အီတလီအမှတ်တရတွေကိုဖြတ်ပြီးခရီးကိုချက်ချင်းခေါ်ဆောင်သွားနိုင်တဲ့အမှတ်တရတွေပါ။
စစ္စလီကျွန်းမှာငါတို့ဘာဝယ်လို့ရမလဲ အရာများစွာ, အချို့အလွန်туристyနှင့်အခြားအချည်းနှီးသော။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးမှာဒီဟာကဘာတွေလဲဆိုတာကိုတွေ့လိမ့်မယ် အကောင်းဆုံးအမှတ်တရများနှင့်အကောင်းဆုံးအမှတ်တရပစ္စည်းများ ဒီလှပပြီးလှည့်စားစရာကောင်းတဲ့အီတလီကျွန်းကနေယူဆောင်လာနိုင်တာပါ။
ဦး ဆုံးအနေနှင့် - ခရီးသွား shops ည့်သည်များစွာနှင့်အထူးသဖြင့် ists ည့်သည်များအတွက်ထုတ်လုပ်သည့်အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများစွာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ သင်ကသူတို့ကို ၀ ယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ဟာအထူးတစ်ခုခုကိုလိုချင်သူဒါမှမဟုတ်အိမ်မှာကျွန်ုပ်တို့ကိုစောင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးလက်ဆောင်တစ်ခုလိုချင်သူတစ်ယောက်ဆိုရင်၊ မင်းရွှေ့ရမယ် အနည်းငယ်ပို။
ဟုတ်ပါတယ်, သင်ကခရီးစဉ်ကိုဘယ်လိုစီစဉ်ထားတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်၊ အုပ်စုတစ်စုမှာဖြစ်စေ၊ ဒါပေမယ့်တတ်နိုင်သလောက်လုပ်ရမယ် ခရီးသွား track ည့်လမ်းကြောင်းမှထွက်ပါ အကောင်းဆုံးကိုရှာဖွေရန်။ အခုဘယ်မှာစျေး ၀ ယ်ရမလဲ။ ယုံချင်ယုံမယုံချင်နေ, စူပါမားကက်များနှင့်လျှော့စျေးစတိုးဆိုင်၌တည်၏။
စူပါမားကတ်ကွင်းဆက်ဖြစ်သော်လည်းများစွာသောအရာသည်မှန်ကန်သည် ဒေသထွက်ထွက်ကုန်များ ဥပမာအားဖြင့်အဓိကထုတ်လုပ်သူများမှအလွန်ကောင်းသောဝိုင်များ။ ကောင်းတယ် Carrefour အလွန်ကောင်းသောဝိုင်များနှင့်ပုံမှန်အလှဆင်အရာဝတ္ထုရောင်းချကြောင်း Palermo ၏ဗဟို၌တည်၏။ On Lidl, Trapani အတူတူပင်။ Pistachio Cream ကိုကြိုက်လား? ဒါကြောင့် Lidl's ဟာကြီးပြီး၎င်းသည်စျေးကောင်းပါတယ်။
စူပါမားကတ်များသို့မဟုတ်အရေးကြီးသည့်စတိုးဆိုင်များအပြင်အခြားခရီးစဉ်ကိုလည်းသင်သွားနိုင်သည် အစာကျွေးအဆိုပါ ဘုံနှင့်သေးငယ်တဲ့ဂိုဒေါင်များ သင်အိမ်သာစက္ကူမှအမှုန့်အ ၀ တ်သို့ ၀ ယ်နိုင်သည်။ ဒီအပြင်အမှန်တရားကတော့ အချို့သောဒေသခံလက်မှုပညာရှင်များသည်သူတို့၏ပစ္စည်းများကိုဤနေရာတွင်တင်ကြသည် နှင့်မပိုကြီးစတိုးဆိုင်များတွင်။ ငါဝက်အူချောင်း, ဝက်အူချောင်း, ကြောပိတ်ဆို့မှုအကြောင်းပြောနေတာပါ။
စျေးဝယ်ရန်နောက်ထပ်ကောင်းသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည် စျေးကွက် သို့မဟုတ်ပြည်တွင်းစျေးကွက်။ ဆိုင်းရာကူစ်းမှာတစ်ယောက်ဟာအလွန် Sicilian ဘာသာစကားဖြစ်တယ်။ ဒိန်ခဲ, အခွံမာသီးနှင့်နံ့သာမျိုးများကဲ့သို့ငါးများ၊ စျေးပေါတဲ့အဝတ်အစားတွေလည်းရောင်းတယ်။ The ဈေး, အတူတူ။
မြို့ကြီးကြီးများတွင်စျေးများရှိပြီးအချို့သည်နေ့တိုင်းဖွင့်လှစ်ထားပြီးအချို့မှာတစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်ဖြစ်သည်။ သေးငယ်တဲ့မြို့ကြီးတွေမှာစျေးတွေကိုယေဘုယျအားဖြင့်တစ်ပါတ်နှစ်ကြိမ်လောက်စည်းရုံးတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာခရီးသွားရုံးကိုသွားပြီးမေးမြန်းရမလဲဆိုတာသိဖို့။
အ ဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုတည်းလား၊ ဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း သငျသညျစပျစ်ဥယျာဉ်ခရီးစဉ်ကိုယူ။ အဲဒီမှာပုလင်းကိုဝယ်ယူနိုင်သည်, ထိုwကန်အမှန်စက်ရုံများထက်စျေးနှုန်းချိုသာပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်ဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်သင့်အားဝိုင်အကြောင်းပိုမိုသင်ကြားပေးမည်ဖြစ်သဖြင့်ပုလင်းမည်မျှလှသောကြောင့်သင် ၀ ယ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ သို့သော်သင်ဤလမ်းလျှောက်ခြင်းကိုမပြုလုပ်နိုင်ပါကခရီးသွားမဟုတ်သောဈေးဆိုင်ငယ်များတွင် ၀ ယ်ရန်ကြိုးစားပါ။ ကျွန်တော်အထက်တွင်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းစူပါမားကတ်သို့ပင်သွားပါ။
ကောင်းတဲ့အမှတ်တရလက်ဆောင်နှင့်လည်းအလွန်အသုံးဝင်သော, တ ဦး တည်းကိုဝယ်ခြင်းငှါဖြစ်ပါသည် စျေးဝယ်ခြင်းတောင်း၊ လက်လုပ်၊ ကျော်ကြားပြီးလှပသော ကော်ဖီ. ၎င်းတို့ကိုအရောင်များနှင့် pompoms များ၊ မှန်များဖြင့်အလှဆင်ထားပြီးစတိုင်များများစွာရှိသည်။ နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ချေဝယ်ယူသောဖြစ်ကြသည် ချော်ရည်ကျောက်ထုတ်ကုန်။
စစ္စလီကျွန်း၌မီးတောင်နှစ်ခုရှိပြီးကာတန်နီးယားနှင့်အနီးစထရိုဘိုလီ၌ရှိသောသေးငယ်သောမီးတောင် (Etna Mount) ရှိသည်။ အမှန်မှာစစ္စလီကျွန်း၏လမ်းများအများအပြားတွင်ကြီးမားသောမီးတောင်ကျောက်တုံးများဖြင့်ခင်းထားသည်။ အခြားအဆောက်အအုံများလည်းရှိသည်။ အုတ်ပုံသဏ္ဌာန်ရှိမီးတောင်ကျောက်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်မီးခိုးရောင်ကျောက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောထုတ်ကုန်များစွာရှိပါသည် လက်ကောက်, အလှဆင်ဖလား, အိုး ...
သန္တာကိုကြိုက်လား ဤနေရာတွင်လည်းရရှိနိုင်ပါသည် သန္တာကျောက်တန်းရိုးရှင်းပြီးအသေးစိတ်ကျသောနားကပ်များနှင့်လည်ဆွဲများမှအလှဆင်ပစ္စည်းများအထိဖြစ်သည်။ သန္တာအရောင်သည်ပန်းရောင်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်အနီရောင်အနည်းငယ်သာရှိပြီးသင်အကောင်းဆုံးကိုရှာဖွေနေပါက၎င်းတို့သည် Trapani တွင်တွေ့ရလိမ့်မည်။
La Caltagirone ကြွေထည် စိတ်ကူး Caltagirone သည် Val de Noto ရှိ UNESCO မှကာကွယ်ပေးသောရွာ (၈) ရွာအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အလွန် baroque နှင့်အလွန် Sicilian အဘိဓါန်, နှင့်အိုးစိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်: ဖလား၊ မျက်မှန်၊ ပန်းကန်၊ urns၊ ဗန်းများ ...
မင်းကြိုက်တယ် ရုပ်သေးရုပ်? Sicilian ရုပ်သေးပြဇာတ်ရုံကိုလူသိများသည်။ Opera dei Pupi သည် ၁၉ ရာစုကတည်းကစတင်လည်ပတ်ခဲ့ပြီးအံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်။ Catania နှင့် Palermo နှစ် ဦး စလုံးသည်ဤလယ်ပြင်၌ကြီးစွာသောခိုင်မာတဲ့အစဉ်အလာရှိသည်။ The ကာတာနာရုပ်သေးရုပ် သူတို့က Palermo ထက်ပိုကြီးပေမယ့်မြို့ကြီးနှစ်ခုလုံးမှာစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုများစွာရှိတဲ့ဆိုင်များစွာကိုသင်တွေ့လိမ့်မယ်။ အများကြီးရှိပါတယ် handcrafted ရုပ်သေး လှပပြီးများစွာသောစျေးနှုန်းများရှိပါတယ်။
သင် ဦး ထုပ်များ ၀ တ်ဆင်လိုပါကယခု tanning သည်ခေတ်နောက်ကျသွားပြီ ဖြစ်၍ သင်ဝယ်နိုင်သည် ပုံမှန် Coppola ဦး ထုပ်။ မာဖီးယားဂိုဏ်းနှင့်အမြဲဆက်စပ်မှုရှိခဲ့လျှင်ယနေ့ပုံပြင်သည်ကွဲပြားခြားနားပြီးဤရယ်စရာ ဦး ထုပ်ကို ၀ တ်ဆင်ရန်ရွေးချယ်ထားသောလူငယ်များစွာရှိသည်။ nonno, အဖိုး။ ၎င်းတို့ကိုသိုးမွှေးအမွေးဖြင့် Palermo တွင်လက်ဖြင့်ပြုလုပ်သော ဦး ထုပ်များအဖြစ်မွေးဖွားခဲ့သော်လည်းနွေရာသီတွင်ဝါဂွမ်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအေးသောဗားရှင်းများရှိသည်။
ကောင်းသောအီတလီခေါက်ဆွဲမပါဘဲအီတလီအီတလီလိမ့်မည်မဟုတ်, ဒါကြောင့်အလွန်ကောင်းသောစျေးဝယ် option ကိုဖြစ်ပါတယ် ခြောက်သွေ့သောခေါက်ဆွဲကိုဝယ်ကြလော့ လက်ဆောင်အဖြစ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ပေးဖို့လွယ်ကူသည်။ အလွန်ကောင်းသောအမှတ်တံဆိပ်ရှိပါသည်, အခမဲ့ Terraဒေသခံအသိုင်းအဝိုင်းများ၏မျက်နှာသာအတွက်မာဖီးယားဂိုဏ်းများ၏ထိန်းချုပ်မှုကနေလွတ်မြောက်လာကြပြီလယ်ကွင်းကနေအတိအကျလာပါတယ်။
ပြီးခဲ့သည့်အပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည် ဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်သေးငယ်သောဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်ဝိုင်ဝယ်ယူပါ။ စစ္စလီကျွန်းသည်ဘီစီ ၁၅၀၀ ကတည်းကဝိုင်များပြုလုပ်နေသည်ဆိုသောအချက်က၎င်းသည်ကျိုးနပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်မိမိကိုယ်ကိုပြီးပြည့်စုံစေရန်နှင့်အကောင်းဆုံးကိုကမ်းလှမ်းရန်အချိန်ရှိခဲ့သည်။
ကျွန်းပေါ်တွင်ဝိုင်ထုတ်လုပ်သည့်areasရိယာ ၂၃ ခုရှိသည် Sirah နှင့် Marsala။ အနည်းဆုံးလူသိများသော်လည်းကောင်းကောင်းလက်ဆောင်တစ်ခုသည်ထိုကြောင့်ဖြစ်သည် Nero d'Avola နှင့် Etna Rosso ။ Tasca d'Amanita ကဲ့သို့သောပိုကြီးသည့်ထုတ်လုပ်သူများ (သို့) သဘာဝနှင့်အော်ဂဲနစ်ဝိုင်များထုတ်လုပ်သည့် COS ကဲ့သို့သေးငယ်သောထုတ်လုပ်သူများရှိသည်။
တစ် ဦး ထက်စပျစ်ရည်ကိုအဘယ်သို့ပိုကောင်းအဖော် ချောကလက်တစ်ဖဲ့? နွေရာသီအလယ်မှာသင်စစ္စလီကိုသွားရင်အရေးမကြီးဘူး ချောကလက်တစ်မျိုးထူးခြားသည် အရည်ပျော်မှုမရှိ el မော်နီကာစတိုင် အရက်ဆိုင်များတွင်ရောင်းချခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ပင်လယ်တစ်လွှားမှ Aztec အမြစ်များရှိပြီးကိုကိုးစေ့နှင့်သကြားဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအားလုံးသည်ငါးပိအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည် အရသာခံသို့မဟုတ် citrus နှင့်ဖြစ်စေ၊ သစ်ကြံပိုးနှင့်ဖြစ်စေကော်ဖီနှင့်ဖြစ်စေ။ သူတို့ကအရမ်းပါးလွှာတဲ့စက္ကူနဲ့ကောင်လေးတွေနဲ့ပတ်ထားတယ်၊ မင်းမှာစူပါလက်ဆောင်တစ်ခုပါ။
နောက်ဆုံးတော့ စစ္စလီကျွန်းတွင်မုန့်ဆိုင်များစွာလည်းရှိသည်, marzipan နှင့်အတူများစွာသောအရာ, ဒါပေမယ့်အဲဒါကို Lemon, ချယ်ရီသီးနှင့်သစ်တော်သီး၏ပုံစံကိုယူ။ ဒါဟာကျော်ကြားတဲ့အကြောင်းပါ Martorana သစ်သီးများသူတို့ဟာတကယ့်အသီးအပွင့်တွေနဲ့တူအောင်၊ ပြီးတော့သူတို့ဟာအသီးတွေကိုသာမကပဲတကယ့်အရာနဲ့တူတဲ့အသားညှပ်ပေါင်မုန့်တွေလည်းလုပ်ကြတယ်။ အားလုံးချောကလက်များကဲ့သို့ finesse နှင့်အတူထပတ်ရစ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Absolut ခရီးသွားခြင်း » စစ္စလီကျွန်းတွင်ဈေးဝယ်သည်